घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू क्रोएसियाई फुटबल खेलाडीहरू डान्स लन्डन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
LB उपनामको साथ एक फुटबल स्टार को पूर्ण कहानी प्रस्तुत; "dee"। यो देजन लोभ्रेन बाल्यकाल कहानी, जीवनी, अभिभावक, पारिवारिक तथ्यहरू, प्रारम्भिक जीवन अनुभव र अन्य उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण कभरेज हो जुन उनी थिए एक क्षणदेखि नै। बच्चा जब उनी बने राम्रोसँग परिचित.
Dejan Lovren को जीवन र उदय। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम र गोल।
हो, सबैलाई थाहा छ कि ऊ विश्वको सर्वश्रेष्ठ बचावकर्मी मध्ये एक हो। जे होस्, केहि थोरैले हाम्रो Dejan Lovren बायो मा विचार गर्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब, थप adieu बिना, सुरु गरौं।
डेजन Lovren बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
डान्स लवरेन मा जन्मेको थियो जुलाई5को 1989th दिन। उहाँ यसको माध्यमबाट यस संसारमा आउनुभयो क्रोएसियाली आमाबाबु, सिल्वा लवरेन (उनको आमा) रसासा लेरिन (उहाँका बुबा)। डेजन जीनिका, एसआरआर यूगोस्लाविया (अहिले बोस्निया र हेर्जेगोविना) शहरमा हुर्के।
के तपाईंलाई थाहा छaबर्षे लोभ्रेन र उसको परिवार युगोस्लाभियाबाट म्युनिकमा भागे? नतिजा स्वरूप, उसले अर्को सात वर्ष जर्मनीमा बितायो। युद्धबाट उम्कने उसको बचपनको अनुभव त्यस्तै हो Granit Xhaka, लुका मोररिक र Xherdan शाकरी।
लोभ्रेन भन्छ कि: "मेरो बचपनका दिनहरूमा म खुसी केटा हुँ। मैले पूर्ण रूपमा जर्मन बोलेँ। म स्कूल जान्छु, मैले सानो क्लबको लागि खेलेँ। " यद्यपि तिनीहरू जर्मनीमा बस्नको लागि आवश्यक कागजात नभएकोले अन्ततः परिवार छोड्नुप .्यो।
तिनीहरू क्रोएशियाको कार्लोभाकमा बसोबास गरे, क्रोएशियाको राजधानी शहर - जग्रेबको w० किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा। लोभ्रेनले सुरुमा क्रोएसियामा बसोबास गर्न गाह्रो भयो र स्कूलमा दुई वर्षसम्म संघर्ष गरिरहेको कारण क्रोसियाली भाषासँग अपरिचित भएको थियो।
डेजन Lovren बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -सारांशमा क्यारियर
लोभ्रेन स्थानीय टोलीका लागि एनके इलोवाक र एनके कार्लोवाकलाई २०० as मा जीएनके दिनामो जगरेबमा सामेल हुनुभन्दा पहिले युवाको रूपमा खेलेका थिए र उनीहरूको स्तरमा बढेका थिए।
जनवरी २०१० मा, उनले फ्रान्सेली लिग १ क्लब ओलम्पिक लियोनाइसको € million मिलियन प्लसमा हस्ताक्षर गरे। लोभ्रेनले जून २०१ June को १th औं दिनमा साउथेम्प्टनमा जानु अघि क्लबको लागि खेल्दा उनले अंग्रेजी पक्षसँग चार बर्षे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
आफ्नो क्यारियरको यस चरणमा, उसले केवल शीर्ष प्रिमियर लिग क्लबमा खेल्ने सपना देख्दछ। त्यो सपना त्यो आएको थियो जब उनी जुलाई २०१ 27 को २th तारिख लिभरपूलमा सामेल भए। बाँकी, उनीहरूले भनेजस्तै अहिले इतिहास हो।
डेजन Lovren बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
देजन लोभ्रेन १ met वर्षको उमेरमा अनीतासँग भेट भयो र गहिरो प्रेममा डुबे। वर्षौंको दौडान तिनीहरू दम्पतीको रूपमा हुर्किए, एक-अर्कामा झुकाव गरिरहेका थिए र एक अर्कालाई कहिल्यै हरेस खाएनन्।
अनीता र लेरिनले गाँठो बाँडेका थिए त्यसैले उनी विवाहको जन्म दिन सक्दैनन्। उनीहरूको विवाह 2013 मा भयो।
दम्पतीका दुई बच्चाहरू सँगै छन्, इलेना र जोसिप। तल लोभ्रेन, अनिता र तिनीहरूका जेठा बच्चा एलेनाको फोटो छ।
डेजन Lovren बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -धोखाधारी अलगाव
देजन लोभ्रेनले उनकी श्रीमतीबाट बेवफाई भएको कुरा पुष्टि गरे कि उनको वनको कामदारसँगको सम्बन्ध द सनले चिनिन्छ। पुरानो साथी र वनकर्मी - डारियो टोरबिक (जन्म १ 1990 XNUMX ०) सँग उनको सम्बन्धको बारेमा थाहा पाएपछि उक्त जोडीको विवाह विघटनको नजिक थियो। तल डारियो टोरबिकको फोटो छ।
अफेयर २०१ 2016 मा डिसेम्बर २०१ Dar मा उनीहरूको गृह शहर झाग्रेबमा भेट हुँदा अफेयर शुरू भयो। यो अनिता हो जसले डारियोलाई इ England्ल्याण्डको लागि उडान गर्न राजी गरे। त्यहाँ पुग्दा तिनीहरू लिभरपूल होटेलमा जम्मा भए र उनीहरूले सयौं प्रेम सन्देशहरू बदले।
यो कसरी सुरु भयो: २०१ 2017 मा, अनिताले इ England्ल्याण्डमा कथित रूपमा सम्बन्ध विच्छेद वकिल हेर्नको लागि आफ्नो घर छोडिन्। उनले डारियोलाई भनिन्छ जसले २०० £ मा-महिना कमाउँछन् र भाडाको फ्लैटमा बस्छन् र तिनीहरू सँगै हुन्छन् र फेरि जाग्रेबमा सर्छन्। उनले उनलाई यो पनि वाचा गरिन् कि उनले लुभ्रेनको बिरूद्धमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने छन, जसले लिभरपुलसँग प्रीमियर लिगमा £ ,200£,००० प्रति हप्ता कमाउँछन्।
जब डिजानले थाहा पाए कि उनले एक धोकेबाजसँग विवाह गरेको थियो, उनी वास्तवमा उनको व्यभिचारमा चोट पुगे। यसले उसको गर्वमा चोट पुर्‍यायो। स्रोत थपियो: दबाब यति धेरै गहिरो भयो जसले मानसिक रूपमा सामना गर्न संघर्ष गरे। " साथीहरू र परिवारले पत्ता लगाउँदा उनी लज्जित थिए। वास्तवमा यसले उसको गर्वमा चोट पुर्‍यायो र उसको फुटबलमा यसले असर गर्यो। लिभरपुल एयरपोर्टमा टिमका साथीहरूसँग भेट हुँदा क्रोएसियाली डिफेन्डरले आफ्नो विवाहको औंलामा पनि औंठी लगाएनन्।
अनीता को धोखाधडी बाकी मित्रहरु र साथीहरु लाई लीनन को स्वास्थ्य को लागी चिन्ता र उनको दिल को दुखाइ उनको टीम को लागि उनको प्रदर्शन को प्रभावित गर्न शुरू गर्यो।
डेजन Lovren बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -मेलमिलाप गर्न सडक
साथीहरूले भने कि अनीता इ England्ल्याण्डको जीवनबाट मोहभंग भयो र डारियोलाई उनी टेक्सट गर्न थालिन् जसलाई उनी १ 16 वर्षको उमेरदेखि नै चिनिन्। उनले उनलाई व्हाट्सएप सन्देशहरू पठाइन् र उनीसँगै एउटा लिभरपूलको पोश मालमाइसन होटेलमा मजा लिन उडेर आई। उनीहरूको मित्रता छिट्टै सम्बन्धमा परिणत भयो र जब उनी जाग्रेब फर्किए तिनीहरूले गोप्य मितिहरू मिलाए। लोभ्रेनले पत्ता लगाए र तिनीहरूको विवाह बचाउनको लागि लडाई सुरु गरे।
जून 2016 मा लन्डन को छुट्टी को व्यवस्था को, विनाशकारी लग रहेको छ, क्रोएशिया को जानन को बावजूद यूरोस मा खेल रहे हो। लियोनले क्रोएशिया प्रबन्धक अन्ट क्याकिससँग पनि रोडेका थिए र टोलीबाट अडिएको थियो। अत्याधुनिक प्रशंसकहरुले यूएसोस बाट केन्द्रिय पछाडि छोड्ने केन्द्र फिर्ता गरे। क्रोएशन्का अखबार जौर्नेजीले भने कि खेलाडीको नजिक स्रोतले यसो भने: "उहाँ पहिले नै सहज हुनुहुन्छ कि उनी राष्ट्रिय टोलीबाट हटाइएको थियो किनकि तिनले आफ्नी पत्नीलाई प्रतिज्ञाको दुई हप्ता सबै धोखाधड़ी आरोपलाई हटाउन र उनको विवाहमा अन्तिम निर्णय गरे। जहाँसम्म भनिएको थियो, तिनीहरू एक वैवाहिक संकटबाट पीडित छन् र डान्सले एनातालाई दुई रोमांटिक हप्ताहरूलाई जूनबाट सबैलाई हटाउन आग्रह गरे। "
तीव्र गति: अन्तमा अन्तमा अन्नाताले आफ्नो प्रेमी डच गर्ने निर्णय गरे र उनीहरूको बच्चा एलेना र जोसिप सँग परिवारको घरमा इङ्गल्याण्डमा लानिनलाई पुन: पेश गरे।
उनीहरूलाई छोटो समयको लागि विभाजित भएको मानिन्छ तर उनीहरूले गर्भवती भएमा सुलभ गरे। उनीहरूले आफ्नो दसौं वर्षगाँठको विवाह मनाईनु अघि लामो समय लागेन।
उनीहरूको दसौं वर्षगांठमा गत फेब्रुअरीमा अनीता इन्स्टाग्राममा उनीहरूको स्नैप साझेदारी गरे। उनले लेखे "तपाईं मात्र एक हुनुहुन्छ म चाहन्छु। । । मेरो जीवनको अन्त सम्म। " लोभ्रेन प्रतिकार गर्‍यो, सार्वजनिक रूपमा उनीहरूको श्रीमती र बच्चाहरू थिए भनेर जिद्दी गर्दै “मेरो सबैभन्दा ठूलो समर्थन। तिनीहरूले मलाई कठिन समयमा पार गर्न मद्दत गरे। ”
डेजन Lovren बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत जीवन
के तपाईंलाई थाहा छ देजन लोभ्रेनसँग उसको व्यक्तित्वमा राम्रो गुणहरू छन्? कृपया तिनीहरूलाई फेला पार्नुहोस्।
डेजन लभिननको क्षमता: डेजन उहाँका सम्बन्धमा धेरै वफादार हुनुहुन्छ। उहाँ अत्यधिक भावुक, सहानुभूति र अत्यन्त उत्साहित हुनुहुन्छ।
डेजन लभिननको कमजोरीहरू: डेजन कहिलेकाहीं मूडी हुन सक्छ। साथै, उनी निराशावादी, संदिग्ध र असुरक्षित हुन सक्थे।
कुन डान्स लवरेनले मनपर्छ: डेजन कला, घर आधारित शौकहरू, नजिकैको वा पानीमा आराम, मायालुहरूलाई साथीहरूको साथ राम्रो खाना बनाउन मदत गर्दछ
कुन ड्यान्जेनले नमनपराएका छन्: देजन अपरिचितहरू मन पराउँदैनन्, उनको आमाको कुनै आलोचना र अन्तमा, व्यक्तिगत जीवनको खुलासा।
तल्लो रेखा भनेको हो, डोजन धेरै भावनात्मक र संवेदनशील छ। थप यति, उहाँ एक जना मानिस हो जसले जोरहेछ। उहाँले गहिरो परिवारको घर र घरको बारेमा हेरचाह गर्नुहुन्छ।
डेजन Lovren बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -शरणार्थ्य जीवन
सरल शब्दमा भन्नु पर्दा, देजन शरणार्थी परिवारबाट आएका हुन्। युद्धले बोस्नेसियाबाट रातभरी भाग्ने बित्तिकै उनीहरूले १ 17 घण्टाको ज्यान गुमाउनुपर्दा उनको परिवारले डराएको कुरा उसले सधैं अनुभव गरेको छ। Dejan Lovren आफ्नो अनुहार तल आफ्नो हथेली चलाउँछ, त्यो कष्टदायी समय को वास्तविकताहरु अझै यति वास्तविक छन्, अझै पनि कच्चा।
यो पीडा कहिल्यै डगमगाउँदैन र बोस्नियाको युद्धको शरणार्थीको सम्झना बन्न पुग्छ जब उहाँ असंख्य अरूलाई हेर्नुहुन्छ, यस्तै अकल्पनीय परिस्थितिमा, बाँच्नको लागि सबैभन्दा सानो शटको लागि सबै त्यागेर। यो उनको दोस्रो तीन विश्वयुद्ध पछि युरोपमा पहिलो नरसंहार उम्कने क्रुशियन आमाबुबा सासा र सिल्भा संग तीन वर्ष पुरानो Kraljeva Sutjeska भाग्ने कथा जस्तै हो।
मुख्य हानि: लभिन र तिनका आमाबाबुले सबै चीजहरू छोडेनन् - उनीहरूको व्यवसाय, साथीहरू, उनीहरूका रोजगारीको जीवन - उनीहरूको मामाको सानो युगोमा जेनेका छोडिसकेपछि उनीहरूलाई मात्र एक थलो कपडा लगाउँदै।
"म चाहन्छु कि सबै कुरा बुझ्न सक्छौ" लुथले भन्यो। “तपाईं धेरै कथाहरू सुन्नुहुन्छ, तर वास्तविक सत्य कसैलाई थाहा छैन। यो भर्खरै भयो। यसले भर्खरै सबै कुरा परिवर्तन गर्यो - सबैको बिचको लडाई, तीन बिभिन्न संस्कृतिहरू [मुस्लिम बोस्नियाक्स, अर्थोडक्स सर्बहरू, क्याथोलिक क्रोट्स] बीच। मलाई अझै याद छ सायरन्स कहिले गयो? मैले मलाई धेरै डराएँ किनभने मैले 'बम' बारे सोचे जुन कुनै पनि समयमा विस्फोट हुन सक्छ।
डेजन Lovren बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
पहिले नै हेरेझैं, डिजान तल्लो मध्यम-वर्गको पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँदछ जुन फुटबलको लगानीले उसलाई र उसको सबैलाई भुक्तान गर्थ्यो।
फेथर: तल देजन र उनको बुबाको एक फोटो छ - सासा लोभ्रेन जब उहाँ लिभरपुलमा सामिल हुनुभयो। यो टुक्रा लेख्दा उहाँ आफ्नो छोराको एजेन्ट हुनुहुन्छ।
मातृभाषा: डेजन लभिनले आफ्नो आमाको बारेमा मजाक गर्दैनन् जसले जसले भावनात्मक रूपमा यस दिन पनि सहयोग गरेको थियो। तल सिल्वा Lovren को एक तस्वीर हो। उनी हालै लवरेन सबैभन्दा नजिकको साथीको साक्षीको रूपमा उभिएका थिए।
भाइरस: देजन लोभ्रेनको कान्छो भाई छभवर लोभ्रेन, जसको तल चित्रण गरिएको छ।
लिभरपूल डिफेन्डर आफ्नो भाई भन्दा years बर्ष जेठो छ जो October अक्टुबर १93 on मा जन्मेका थिए। उनको जेठो दाइजस्तै डेभन पनि एक फुटबलर हो, आफ्नो बुबा भन्दा राम्रो। ऊ आफ्नो जेठो दाभोरसँग हुर्केको थियो जो एक फुटबलर पनि हो।
डेजन Lovren बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -पत्नीलाई सोशल मिडियामा रेफरी भनिन्छ
उनीहरूको विवाहभन्दा एक वर्ष अघि, जून १२ मा जापानी रेफरी युची निशिमुराले ब्राजिल – क्रोएशिया खेलमा विवादास्पद कल गरे जसले ब्राजिलको -12-१ ले जीतमा योगदान पुर्‍याउँछ। खेलको बखत, पेन्सिल कल देजन लोभ्रेनको बिरूद्ध भयो। यसले उनको श्रीमती अनीतालाई रीस उठायो जसले इन्स्टाग्राममा लगिन् र ब्राजिलको जर्सीमा निशिमुराको फोटो पोस्ट गर्‍यो, जसले सोशल मिडिया उन्माद निम्त्यायो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो डेजन लवरेन बचपन स्टोरी प्लस अनौपचारिक जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!।